Taageerayaasha Fanaanka Justin Bieber oo sara kac sameeyay Mudooyinkii u danbeeyay | Entertainment and News Site
Home » guud » Hollywood » Taageerayaasha Fanaanka Justin Bieber oo sara kac sameeyay Mudooyinkii u danbeeyay
daajis.com:-Qiyaaso ay bixiyeen dadka wax daraasadeeya ayaa lugu soo ogaaday in taageerayaasha Fanaanka da,da yar ee ka soo jeeda Dalka Canada Justin Bieber ay sara kac sameeyeen mudooyinkii u danbeeyay .
Justin ayaa noqday Fanaanka loogu jacayl yahay Dalalka Maraykanka Uk ,ustaraliya iyo Dalal kale sida daraasaadkaa lugu soo aruuriyay waxana la sheegay in uu fanaanka noqday mid tageerayaal badan soo jiitay sanooyinkii u danbeeyay .
Bieber ayaa socaadlo kala duwan ku tagay Dalal dhoor ah halkaa oo intii uu joogay ku qabanayay Barnaamijyo Bandhigyo ah kuwaa oo dad badaan soo jiitay dareenkooda waxa uuna Fanaanka noqday mid dad badan is jacalaysiiya.
Justin ayaa lugu soo waramayaa in Dalka Maraykanka uu yahay dalka tageeraha ugu badan ku leeyahay waxaana la sheegay in dad badan ay aad uga helaan heesahiisa oo caan ka noqday Dalka Maraykanka .
kuwaana Akhriso Caadi Ma Ahan: guud, Hollywood